Ukukhiqiza - amathani ihektha ngalinye ngonyaka
4 tonnes fresh, 1 tonne eyomile, 30 amalitha amafutha
amathani ayi-10 amasha, ama-2 amathani amile, amafutha angama-60
ama-20 + amathani amasha, amathani angu-4 + omile, ama-150+ amalitha amafutha
Ukuvuna i-thyme kwenziwa kokubili ngesandla nangokusebenza ngokuya ngobukhulu bokusebenza. Emayunithi amancane okukhiqiza nasezindaweni zokugcina izithombo, kwenziwa ngesandla.
Ukukhiqizwa okusha: qala ukuvuna ekuseni lapho izinga lokushisa lisahle. Ukuvuna amathiphu amasha kungaqala cishe amasonto angu-12 ngemuva kokutshala izithombo ze-thyme.
Ukukhiqizwa okumile: Ukukhiqizwa kwe-thyme eyomile, ukusika kungasetshenziswa ngokushesha uma kukhona amaqabunga okwanele okufanele avunwe. Iningi lokukhula kwemifino liyanqunywa ngaphambi nje kokuqala kwezimbali ezigcwele, lapho amandla amafutha ephakeme kakhulu. I-cuttings yabe isomisiwe ngo-32°C. Ungasebenzisi umoya oshisayo kunama-36°C njengoba kuzobangela ukuthi amafutha aphikisayo aphume emlonyeni futhi ukunambitheka nephunga kuzolahleka.
Ukukhiqizwa kwamafutha okubalulekile: Amafutha asemqoka kakhulu avela ekuvuneni nasekuhlanjululeni amaqabunga e-thyme ngaphambi nje kokuba angene embali egcwele lapho amafutha esitshaleni ehle kakhulu. Ukukhiqiza okuphelele kungalindelwa kusukela ngonyaka wesibili.
Ukukhiqizwa okusha: Emva kokuvuna, gcina i-thyme entsha ku-4°C. I-thyme ingagcinwa cishe amasonto amabili. Umswakama onobuhlobo obulondoloziwe kufanele ugcinwe ngaphezu kwama-95% ukuvimbela ukuphelelwa amandla kwamanzi. Amakhambi amasha alahlekelwa ukunambitheka kwawo okuvuthwe ngakho-ke kungcono kakhulu ukudayiswa futhi asebenzise i-thyme esheshayo ngokushesha ngangokunokwenzeka.
Ukukhiqiza okomile: Amaqabunga omisiwe ahlanganiswe ezinkantini ezingenazimpande ngokushesha ngangokunokwenzeka ukuze alondoloze umbala nokuvutha kwawo. Hlala cishe ngo-10°C. I-thyme eyomile nayo ingafakwa iqhwa ngamaphakheji asindile.
Amafutha abalulekile: Gcina amafutha abalulekile ebhodlela endaweni ebomvu futhi epholile cishe unyaka kuya ezinyangeni ezingu-18 emva kokufaka ibhodlela. Emva kwalokhu, amafutha aqala ukulahlekelwa amandla nokuphunga kwawo.
Amakhambi anamakha afana ne-thyme ngokuvamile anezinambuzane nezinambuzane ezimbalwa njengoba iphunga eliqinile elinomsoco we-thyme lisebenza njengezinambuzane eziphikisayo. Kodwa-ke, kungcono kakhulu ukulandela umbuso wokuvikelwa kwezitshalo obunqunywe yisikhulu sokwelusa noma i-agronomist. Abathengisi bamakhemikhali basendaweni ngokuvamile babe nezinhlelo ezifanele noma banganikeza ulwazi mayelana nabacebisi abahle kakhulu abaseduze nendawo yokukhiqiza.
Ama-aphid, ama-Snout beetles, ama-spider izibungu, izinkila kanye nama-whiteflies.
I-Alternaria, i-Botrytis, i-root root kanye ne-rust yizinkinga ezivamile.